“Waar Dalka Ha Loo Gurmado Oo Ha Laga Badbaadiyo Kacdoonnada Siyaasiga Ee Inyar Oo Dan Lihi Waddo” | Somalilandpost
“Waar Dalka Ha Loo Gurmado Oo Ha Laga Badbaadiyo Kacdoonnada Siyaasiga Ee Inyar Oo Dan Lihi Waddo”
Hargeysa (SL.Post) Sheekh Aadan X. Maxamuud (Aadan Siiro) oo ka mid ahCulimada Somaliland, ayaa khudbaddii salaadii Jimcaha kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin kacdoono Siyaasi ah oo uu sheegay inaydDalka ka wadaan Koox uu tilmaamay inay dano gaar ah leeyihiin.
Sheekh Aadan-Siiro waxa kale oo uu sheegay in Somaliland ay soo wajahayso isbedel, kuwaasi oo uu kala mid ah yahay Isbeddellada kala duwan ee Geeska Afrika iyo Guud ahaan Caalamku gelayo.
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey oo khudbadiisa sii wata, waxa uu yidhi “Ummadda wanaagsan ILAAHAY wuxuu siiyaa Hoggaamiye Cumar Binu Khadaab oo kale ah. Marxaladaha Adag Muslimiintu waxay lahaayeen Rag (Xalkeeda gaadha). Laakiin haddii Shanta Saladood kugu adkaadaan, Waxa Muslimiintana (Hantida) aad iska farsamaysato, xuquuqda Dadkana waydaarato maxay noqonaysaa Quwadda ku riixeysaa marka Marxalad adag timaaddo.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “Waxaanu kula talinaynaa Culimada, Salaadiinta, Nabad-doonnada, Dhallinyarada Aqoonta leh, Hooyooyinka iyo Cid kasta oo Caqli iyo Garasho lagu tuhmayo, waxaanu leenahay waar Dalka ha loo gurmado oo ha laga badbaadiyo Kacdoonnada Siyaasiga ah ee inyar oo Dan lihi waddo. ILAAHAYOOW waanu u sheegnay oo waanu wada gaadhsiinay, waxaanu leenahay wa